संगीत चिकित्साको त्यो हृदयविदारक दृश्य
'फूलको आँखामा फूलै संसार
काँडाको आँखामा काँडै संसार …'
गीतारको सुमधुर धुन बजाउँदै एक गोरी महिलाले गाएको गीत जारी थियो ।
बिरामी शय्यामा पल्टिरहेका थिए । बिरामीको कक्षमा कोही मेचमा, साेफामा बसिरहेका थिए भने कोही यत्रतत्र उभिरहेका थिए । बिरामी कुरुवाहरू सबैको अनुहार निन्याउरो थियो । सबैका आँखाका कोषहरू रसाएका थिए । केहीको आँखाबाट झरेका आँसु गलाबाट तलतिर बगिरहेको थियो । बिरामी भने सन्निकट मृत्यु कुरिरहेका थिए । कुरुवाहरूलाई थाहै थिएन, कतिबेला बिरामीको प्राणपखेरु अकस्मात् उड्ने हो । दृश्य कति हृदयविदारक थियो ? त्यो दृश्य सामना गरेपछि मात्र महसुस हुन सक्थ्यो ।
करिब ३० वर्षीया एक गोरी अंग्रेजी संगीत चिकित्सक महिला बिरामीको मन शान्तिका लागि बिरामी कक्षमा छिरेकी थिइन् । उनले कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले रचेको र आनी छोइङ डोल्माले गाएको माथिको चर्चित गीत गीतार बजाउँदै बिरामीलाई सुनाएकी थिइन् । बिरामी पनि सकी नसकी गाउँदै थिए ।
बिरामीको अवस्था र बिरामी कक्षको माहौलका कारण मैले संगीत चिकित्सक ती गोरी महिलाको नाम सोध्ने आँट गर्न सकेको थिइनँ । त्यसैले ती गोरी महिला अस्पतालमा स्वयंसेवी थिइन् वा जागिरे, थाहा थिएन मलाई । यद्यपि ती महिलाको गायनमा नेपाली शब्दको उचारणमा समेत अंग्रेजी भाषाको प्रचुर प्रभाव सुनिन्थ्यो । संगीत चिकित्सक ती गोरी महिलाले आफूलाई नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजीलगायत विभिन्न भाषाका गीत आउने बताएकी थिइन् । बिरामीको छनोटमा आफू गीत गाउन इच्छुक रहेको पनि ती महिलाले सुझाएकी थिइन् ।
बिरामीले मुकेश कुमार र लता मंगेशकरले गाएको सन्तोष आनन्दलगायतले रचेको सर्वकालिक दार्शनिक खालको हिन्दी गीत गाउन अनुरोध गरेका थिए । गीत, संगीत र आफ्नो पेसाप्रति भुतुक्क ती गोरी महिलाले असीम गहिराइमा डुबेर अर्को हिन्दी गीत गाएकी थिइन् ।
'एक प्यार का नगमा है
तेरी मेरी कहानी है ।
आना और जाना है.….।'
यो पाँच वर्षअघिको कुरा हो । स्वर्गीय भुवन रानालाई एडमन्टनको ग्रे नन कम्युनिटी अस्पतालमा कुर्दाखेरीका दृश्य थिए ती । स्मृतिमा अतीतका पानाहरू सुस्तसुस्त पल्टिए ।
दश वर्षअघि रहर, बाध्यता, आवश्यकता, पारिवारिक दायित्व र सुनिश्चित-सुन्दर भविष्य खोज्दै हजारौँ नेपाली क्यानडाको स्थायी प्रवेशाज्ञा (पीआर) बोकेर परिवारसहित क्यानडा पसेका थिए । यसरी नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा पृथक-पृथक विषयहरू पढाएर क्यानडा छिर्ने गुरुहरूको लर्को सन् २००९ देखि २०१५ सम्म जारी थियो ।
क्यानडाका विभिन्न विद्यालयमा हजारौँहजारको संख्यामा शिक्षण सहायकहरूको आवश्यकता परेको थियो । हरेक वर्ष झण्डै ४ लाखको संख्यामा आप्रवासीहरू भित्र्याउने क्यानडाले शिक्षण सहायकको अभाव पूर्ति गर्न हजारौँ नेपाली गुरुलाई स्थायी प्रवेशाज्ञा दिएर आफ्नो देशमा स्वागत गरेको थियो । त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न विषय पढाउने गुरुहरू परिवारसहित क्यानडा आइपुगेका थिए । त्यसको प्रक्रिया के के थियो ? पछि सम्झौँला ।
तिनै गुरुहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो- स्वर्गीय दाजु भुवन राना । सन् २०११ सेप्टेम्बरमा श्रीमती र एक मात्र छोरीसहित टोरोन्टो आएको नौ महिनापछि एडमन्टन सहर सर्नुभएको थियो । नेपाल छउञ्जेल भुवन दाजुलाई कुनै रोग थिएन ।
मिलनसार, मीठो बोल्ने भुवन राना सन् २०१३ मा एडमन्टनमा खोलिएको नेपाली पाठशाला गुरुकुल चलाउन अहोरात्र खटिनुभएको थियो । त्यसै क्रममा मेरो पनि चिनजान भएको थियो । राना दाजुलाई सन् २०१३ देखि मधुमेह रोग देखापर्‍यो । त्यसपछि बढी तनाव लिने बानी थपियो । अर्थशास्त्रमा बिद्यावारिधि गर्न रहर गर्नुभएका भुवन दाइलाई सहरकै कन्कोडिया विश्वविद्यालयले दिवंगत भएको २ महिनापछि विद्यावारिधि पढ्न निमन्त्रणापत्र पठाएको थियो । रमा राना भाउजूले मलाई सुनाउनुभएको थियो ।
'सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ' भएको थियो राना परिवारका लागि । सन् २०१४ मा एडमन्टनमा घर किनेको राना परिवारको रानु मौरीमा पेट दुख्ने समस्या देखा परेको थियो । नर्स श्रीमती रमा रानाले सुरुसुरुमा गानोगोलाका कारण पेट दुखेको होला भनेर त्यस्तै औषधि खुवाउने सोच्नुभएको थियो । भाउजूले दाजुको बिमार निमन पार्न घरेलु उपचार र खानपिनमा ध्यान दिँदै सतर्कता अपनाउनुभएको थियो ।
चिकित्सकलाई देखाउँदा ग्यास्ट्रिकको औषधि खान सुझाइएको थियो । औषधि खाँदा पनि पेट दुख्ने क्रम नथामिएपछि अल्ट्रासाउण्ड गरिएको थियो । त्यो अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्टमा केही देखिएको थिएन । सघन र विस्तृत अल्ट्रासाउण्डका लागि समय मिलाउने कुरा हुँदै थियो ।
भुवन दाजु नेपाल जानुभयो । नेपाल पुगेपछि त्यहाँको निजी अस्पतालमा गरिएको अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्टमा पत्ता लाग्यो, ’डरलाग्दो रोग’ । ५० वर्षीय भुवन राना दाजुमा प्याङ्क्रियाटिक क्यान्सर (सातपत्रेमा अर्बुद रोग) देखिएको थियो । त्यो सन् २०१५ को दसैँतिहारआसपासको कुरा थियो ।
सन् २०१६ को जनवरीमा राना दाजु एडमन्टन फर्किनुभएको थियो । तर, घर आएकै भोलिपल्ट ग्रे नन कम्युनिटी अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । प्यान्क्रियाटिक क्यान्सर पनि यति प्राणघातक थियो भन्ने के थाहा । मैले त जीवनमै पहिलो पटक सुनेको थिएँ त्यो रोगको नाम । उफ ! निमन नहुने रोग लागेको थियो भुवन राना दाजुलाई ।
'यो जिन्दगी खोइ के जिन्दगी
पसलको शाेकेसमा सजाएर राखेको
चुरीजस्तो छ यो जिन्दगी
प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी
यो जिन्दगी खोइ के जिन्दगी
सस्तो रबरको चप्पलको फित्ताजस्तो छ यो जिन्दगी कतै बाटामा हिँडदा हिँडदै
च्वाट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी
यो जिन्दगी खोइ के जिन्दगी ।'
कवि हरिभक्त कटुवालको भावझैँ अस्पतालले मृत्युको मुखनजिक पुगेका बिरामीहरूलाई शान्तिपूर्वक मृत्यु स्वीकार गराउन संगीत चिकित्सा प्रयोग गरेको थियो । त्यही क्रममा संगीत चिकित्सकसँगै मैले त्यो हृदयविदारक दृश्य देखेको थिएँ । त्यस्तो दृश्य विगतमा कहिल्यै देखेको थिइनँ । 'संगीत चिकित्सक' भन्ने शब्द पनि त्यसअघि कहिल्यै सुनेको थिइनँ । त्यतिबेला बिरामी भुवन राना दाजुले नदेख्ने गरी मैले आँसु बगाएको थिएँ ।
विदेशिएका गुरुहरूमध्ये एडमन्टन सहरमा बसोबास गरेर अकस्मात् दिवंगत हुनुभएको पहिलो नेपाली हुनुहुन्थ्यो भुवन राना दाजु । उहाँको अन्त्येष्टि पनि यस सहरमा बस्ने नेपालीका लागि पीडादायक थियो । यहाँको एउटा गिर्जाघरमा वैदिक र बुद्ध परम्परालाई मानेर अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।
स्वर्गीय भुवन राना यो संसार छोडेर जानुभएको अहिले पाँच वर्ष भयो । तर, हरेक वर्षको फेब्रुअरी महिनामा यहाँका नेपालीहरूले उहाँलाई सम्झन्छौँ । आखिर जिन्दगीको अर्को नाम सम्झना, बिर्सना, सम्झना र केवल सम्झना त रहेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २२, २०७७, ०८:३८:००
नाम्जुङमा ट्याक्टरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु 1 min read